सेती रिभर साइड पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य : अधिकारी – .:: Welcome to Saurahaonline.com
सेती रिभर साइड पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य : अधिकारी
पोखरा महानगर ३३ स्थित कस्यारमा सात जना युवा व्यवसायीहरुको संयुक्त लगानीमा सेती रिभर साइड रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ । बजारको कोलाहल भन्दा केही टाढा शान्त वातावरणमा रमाउन चाहनेहरुका लागि रिसोर्ट आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । रिसोर्टमा लगानी गर्नुको उद्देश्य, रिसोर्टका विशेषता लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सञ्चालक सरोज अधिकारीसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
पर्यटन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्नुभयो ?
प्रदेश नंं ४ को राजधानी बिशेष गरी पोखरा महानगरपालिका भित्र विभिन्न व्यावसायिक गतिविधि बढिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायको भविष्य राम्रो छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो । यो व्यवसायमा लागेर केही उदाहरणीय कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मसहित केही युवाहरुको संयुक्त लगानीबाट हामीले पर्यटन व्यवसायमा नयाँ शैलीबाट पाइला टेकेका हौं । शान्त तथा स्वस्थ वातावरण रहेको स्थान तथा गाउँघरमा बसेको अनुभव प्रदान गर्ने तरिकाले हामीले रिसोर्ट सञ्चालन गर्न सफल छौं । पोखरा ३३ मा रिसोर्ट छ । कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्यायौं । आन्तरिक पर्यटकलाई मध्यनजर गरेर रिसोर्ट संचालन गरेका हौं ।
रिसोर्ट बजारबाट केही टाढा हुँदा समस्या भएको छैन ?
व्यवसायको शुरुवातमा त टाढा भयो भन्ने लाग्थ्यो । सडकको विकास पनि राम्रो भएको थिएन । तर, भविष्यमा राम्रो हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क थियौं । अहिले पर्यटकको भिड बढिसकेको छ । एक वर्षको अनुभवमा हामी सन्तुष्ट छौं । टाढा भएको अनुभूति भएको छैन । बजारको भिडबाट केही टाढा शान्त स्थानमा पुग्ने र रमाउने क्रम बढिसकेको छ ।
सेती रिभर साइडका विशेषताहरु के–के छन् ?
बजारमा कृत्रिम चिजको विकास भइरहेको छ । हामीले स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपजको प्रयोग गर्छौं । अर्गानिक खानाको स्वाद लिन पनि यहाँ आउन हामी आग्रह गर्छौं । बजारमा आउने खानेकुरामा धेरै मिसावटका साथै केमिकल प्रयोग गरिएको हुन्छ । हामीले स्वच्छ तथा स्वस्थ खाना खुवाउँछौं । पारिवारिक वातावरणमा हामी सेवा सुविधा प्रदान गर्छौं । हामीले आफ्नो फार्ममा पनि तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छौं । बजार क्षेत्रबाट केही टाढा शान्त स्थान तथा सेती नदीको काखमा रिसोर्ट छ । अन्य समयमा भन्दा बिदाको दिनमा पर्यटकको संख्या धेरै रहने गरेको छ । हामीसँग स्विमिङ पुल छ । बच्चाको लागि पार्कको व्यवस्था पनि गरेका छौं । गर्मीको समयमा प्राकृतिक गुफामा बसेर शितलता लिन सकिन्छ ।
रिसोर्टमा कतिवटा कोठा छन् ?
हामीसँग सिङ्गल तथा डवल गरी १० वटा एटेच कोठा छन् । सेमिनार हल पनि छ । बिस्तारै डिलक्स रुम बनाउँछौं । करिब २० रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा रिसोर्ट फैलिएको छ । करिव साढे २ करोड रुपैयाँ लगानी रिसोर्टमा भएको छ । एक रात बसेको प्रतिव्यक्ति करिव १ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ । प्रत्यक्ष १२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा ४ जना छन् ।
रिसोर्टमा कसकसको लगानी छ ?
रिसोर्टमा ७ जनाको लगानी छ । हाम्रो ‘योङ एण्ड इनर्जेटिक टिम’ बनेको छ । कोही वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको हुनुहुन्छ त कोही यहाँ नै काम गरेको हुनुहुन्छ । म सहित पदमराज पौडेल, वीरेन्द्र बानियाँ, नारायणप्रसाद भण्डारी, अस्मित सुवेदी, भुपाल..थापा, भीम बहादुर बानियाँको संयुक्त लगानी छ ।
रिसोर्टमा आउने ग्राहकको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
हामीले ग्राहक तथा पर्यटकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । यहाँ आएर गएपछि अर्को पटक पनि आउने गरेको हामीले पाउछौं । साथै यहाँ आएका साथीभाइ मार्फत पनि नयाँ पर्यटक तथा ग्राहक आउने गर्नुभएको छ । हामी यसबाट उत्साहित भएका छौं । बिदाको दिनमा बस्ने गरेर आउने र अन्य दिनमा पारिवारिक तथा साथीभाइसँग आएर रमाइलो गर्ने क्रम बढेको छ ।
म व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँ । नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि र पर्यटन हुन् भन्ने चर्चा धेरै चल्छ । साथीसँग मिलेर मैले चितवनको सौराहामा नेचर सफारी विच क्याम्प रिसोर्ट संचालन गरेको थिएँ । त्यसबाट पनि मलाई यस क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भयो । आफ्नो अनुभव तथा ज्ञानलाई आफ्नै ठाउँमा उपयोग गर्नुपर्छ भनेर म यहाँ आएँ । यो पनि विकासको पाटो हो । यस ठाउँको पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि यो आधार बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिला यहाँ दिउसोमा आउँदा पनि डर लाग्ने खालको ठाउँ थियो । कुनै समयमा यहाँ धान रोपाइँ पनि हुन्थ्यो । यो ठाउँलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा ल्याउन धेरै मेहनत गरेका छौं । अहिले यो ठाउँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ ।